Esikhathini namashumi okugcina eminyaka yawo wokugaya ukudla izifo uhlelo Ziyanda izingane ezisebenzisa. Isisu uyaphumula umthwalo omkhulu ngenxa yokuphila umzimba nokudla okungafanele. Kanti futhi, abantu kudla imali enkulu izidakamizwa, nokuthuthukisa imboni yezokudla kudala eziningi yingozi imikhiqizo yezempilo. Konke lokhu kwaholela yokuthi izimpawu kolwelwesi futhi izilonda esiswini ngokuvamile kwenzeka kubantu. Akukhona nje kuphela abantu asebekhulile, kodwa futhi intsha ngisho nezingane ukuzwa besisu ubuhlungu, dyspepsia, isilungulela. Kubantu abaningi, lezi zimpawu baye sekuyinsakavukela, futhi musa ukuya odokotela, sokubhekana nazo bebodwa. Kodwa lesi simo sengqondo kungaholela edabukisayo. Ngakho ungalibali umkhankaso emtholampilo, futhi uye kudokotela uyofuna icebiso ngokushesha nje isaziso izimpawu izilonda futhi kolwelwesi.
Izici lezi zifo
kusukela epilweni yangamalanga yesimodeni kudinga umuntu ukunakwa ngokucophelela ukuze inhlalakahle yakho. Kwesinye isikhathi izimpawu of kolwelwesi futhi izilonda esiswini siyayamukela ukugula abavamile noma ukudla okunobuthi. Kungani ngeke ngibashiye zingagadiwe? Kolwelwesi is abavusa mucosa esiswini, okuyinto kuhambisana kuwukwephula umsebenzi walo secretory. Lokhu kuholela ukuphazamiseka ukugaya. Futhi emizweni ezingemnandi, inqubo kungaqeda umsoco egazini. Ngaphezu kwalokho, akukho ukwelapha ukuvuvukala iqhubeka, futhi ithuthukisa kuphela ngoba ukudla njalo kuya esiswini, abakucasulayo le mucosa avuvukele. Kolwelwesi kuba amahlala khona, uma umuntu eqhubeka nokuyibamba silondoloze indlela yokuphila, kukhona isifo. Lesi sifo kuyinto eside omunye: kuthiwa izinkathi exacerbations esikhundleni remissions. Abanye ngalesi izimpawu isikhathi izilonda esiswini kungukuthi ngisho nokugcina. Izimpawu ibonakale kuphela ngesikhathi exacerbations. Kodwa ngaphandle kokwelashwa izilonda ingaqala eziyingozi, kuze Oncology.
Izimbangela zezifo isisu
- Ubuthi amakhemikhali.
- Ukusetshenziswa engalawuliwe kwezidakamizwa, ikakhulukazi izidakamizwa "aspirin", izidakamizwa eqeda ukuvuvukala nemithi elwa namagciwane.
- imikhuba engalungile - ukuphuza utshwala noma ukubhema.
- Ukudla Engalungile: kakhulu uma sezidla noma ukudla ebusuku, ukuhlafuna abampofu noma ukudla okubandayo.
- Ukusetshenziswa ukudla kushisa noma kubanda kakhulu, izinongo hot, ukudla okuthosiwe kanye ushintsho.
- Ngokuvamile izimpawu kolwelwesi futhi izilonda esiswini zenzeka zisencane ngenxa yofuzo.
- Ngezinye izikhathi ukuvuvukala kwenzeka ngenxa ubuthi e isifo so-renal.
Zonke lezi izizathu embulwa ososayensi isikhathi eside, kodwa ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi izimpawu kolwelwesi futhi izilonda esiswini zenzeka ngisho ngabantu abaphilile ukudla ngendlela efanele. Futhi ngasekuqaleni 21 leminyaka th kwatholakala imbangela eyinhloko mucosal ukuvuvukala.
Yini ebangela kolwelwesi kanye isilonda
Ososayensi baye bathola igciwane ethile angaphila mucosa esiswini. Nanguya olukhuni kakhulu futhi kubangela izinkinga eziningi. Bayibiza ngokuthi helibakteriey. Kwatholakala ukuthi umzimba likhona emzimbeni e-90% abantu, kodwa hhayi wonke ogulayo. imisebenti yayo engasenamahloni ngempumelelo yi amasosha omzimba enamandla. Kodwa ngaphansi kokucindezeleka, ukukhathala noma ukwehla umzimba ozivikela yasebenza futhi Helicobacter pylori okubangela ukuvuvukala. Uma ingakwenzi lokho nakani uqale ukwelapha it, ama-bacterium sekuqede odongeni esiswini, futhi kukhona isifo. Phela, sekuyisikhathi eside waphawula ukuthi isilonda acute landile labo banovalo, ukusebenza ngokweqile hhayi ulale ngokwanele. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi indlela yokuveza imizwa yabo, lezi zifo, ngesikhathi ukuqala ukwelashwa.
Kolwelwesi - izimpawu
Izimpawu zesifo aziwa eziningi, nakuba ngezinye izikhathi eyiphutha amagciwane overgrowth noma ukudla okunobuthi. Ikakhulukazi yokudleka kolwelwesi lwesisu oyingozi siphela kanzima, kodwa yingenxa yalokhu, ezimweni eziningi, iziguli zithole ukwelashwa. Futhi uma isifo esingamahlalakhona futhi kwenzeka cishe akukho izimpawu ngokuvamile badinga ukwelashwa akuyona kwenziwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi ukuthi hlobo luni isifo - kolwelwesi, izimpawu, izimpawu zayo kanye zokwelapha. Wazi kanjani ukuthi umuntu egula?
- Kukhona ezidabukile noma abukhali ubuhlungu esiswini engenhla, angaba emva kokudla, kodwa kuyenzeka futhi okuphambene nalokho.
- ukucanuzelelwa inhliziyo njalo, ikakhulukazi ekuseni ngemva kokudla, ngokuvamile ukuhlanza, regurgitation noma isilungulela.
- esesuthi Ngezinye izikhathi kuyehla khona, ukubuyisa kanye ukuvuvukala. Ngemva kokudla kukhona umuzwa wobukhulu, ukugcwala esiswini.
- Ngokuvamile ukungezwa lesi sifo emathunjini - uhudo noma ukuqunjelwa.
- Ezimweni ezimbi kakhulu, lapho umzimba sintula izakhi ngenxa malabsorption kungaba buthaka, umfutho ophansi wegazi, ukucasuka kanye palpitations.
Kodwa ngaso sonke isikhathi isiguli ngokwakhe ingaze izimpawu kolwelwesi esiswini. Izimpawu zingase zingaveli ngokucacile, ikakhulukazi ezingamahlalakhona. Ikakhulukazi kusukela kukhona izinhlobonhlobo eziningana lesi sifo, futhi ezimweni eziningi, uphethwe kungaba udokotela emva ukuhlolwa kokufaneleka okukhethekile.
Isifo ososayensi isikhathi eside futhi ibilokhu wafunda kahle, ngakho zabela izinhlobonhlobo kolwelwesi. Kodwa kaningi ihlukaniswe ngokuvumelana imisebenzi of juice esiswini:
1. kolwelwesi ne asidi evamile. Kulokhu, lo uketshezi isisu akuyona siphukile, kukhona ukuvuvukala kuphela ngenxa nokuchayeka kumakhemikhali okungcola virus.
2. kolwelwesi ne-asidi eningi kuvamile. Lokhu kungase kube ngenxa imikhiqizo mkhuba ukuthi kukhuthaza ukukhiqizwa kwe juice esiswini, noma amaphilisi owaphuzayo. Leli fomu libhekene isilungulela njalo, regurgitation acid, ukuqunjelwa kanye nomdwebo izinhlungu esiswini ebusuku noma phakathi nesikhathi sendlala.
3. kolwelwesi ne asidi ongaphakeme kungenziwa waqaphela ngumuntu isicanucanu njalo, ikakhulukazi ekuseni, ukungakuthandi ukudla, ukubuyisa futhi ukunambitheka embi emlonyeni. Phakathi nesidlo ngokushesha umuzwa ukugcwala.
Lapho kungenzeka ukuthuthukisa kolwelwesi
Manje izifo esiswini kakhulu ngezicabha. Bayanda, ungathola izimpawu kolwelwesi umntwana ngisho at zasenkulisa yobudala. Lokhu kungachazwa hhayi kuphela kwendawo ezungezile. Ukuyekwa Sakudala ibele kanye nokuncelisa aphelele abe nomthelela omubi empilweni esiswini somntwana. Ngale ndlela umntwana kumiswa sokugcina isimiso sokugaya ukudla bungene ugcina iminyaka eyisikhombisa. Ngaphambi kwalokho, zonke izifo, imikhuhlane, isibungu KWAMAGUNDANE, ukucindezeleka nokungaqiniseki ekudleni kubonakala kakhulu kuso futhi kubangele eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa ngomsebenzi wayo. Izimpawu kolwelwesi umntwana kancane ihlukile kuleyo ebonwe abadala. Izingane ezisencane zingase zibe nje akudle, babe Moody futhi sicasuke. Ingane emidala kuno kukhona okukhulu ubuhlungu besisu, okuyinto kwaqina lapho isidlo.
Izimpawu izilonda esiswini
Izimpawu ke anjengomhlambi kolwelwesi kancane, kodwa kukhona ezinye izici. Izinhlungu zivamise ukwenzeka ngemva kwesikhathi esithile ngemva kokudla iya ngemuva kokuthatha antacids. Ubuhlungu anganika emuva ezigcwala wonke komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Kepha kolwelwesi, kukhona isicanucanu nokuhlanza, ubuhlungu besisu, ukungakuthandi ukudla ukuvuvukala. Kodwa izilonda akuyona nobuntu imfiva, isifo sohudo kanye nesiyezi. Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kundlu ubuthi noma izifo ezithile.
Ukuze izilonda libhekene izinkathi ngiwela ogibeni lwezidakamizwa, ngokuvamile entwasahlobo and ekwindla. Abakwazi eside kufika ezinyangeni ezimbili, futhi ngezinye izikhathi ukuthethelelwa ihlala iminyaka eminingi. Ngaleso sikhathi, ngisho nokuncane isilonda is hhayi waphawula, bese kubonakala futhi. Avuse ukucindezeleka yayo ukuthuthukiswa, kwehle amasosha omzimba, ukukhathala engayitholi nokunwetshiwe kwezidakamizwa ezithile.
I esiyingozi isilonda
Ngezinye izikhathi izimpawu izilonda futhi kolwelwesi akwenzeki, kanti isiguli ongawamukeli ukwelashwa esifike ngesikhathi ngoba abazi ukuya kudokotela. Kodwa Yebo ngisho asymptomatic lesi sifo kuyingozi kakhulu. Ngemva isifo - akusiwona nje yisishiso ulwelwesi lwamafinyila, kuyinto ukubhujiswa kwalo. Khona-ke aluphumeleli uqobo, nokuthi akuzange kube nezinkinga, kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela phuza imithi, kodwa futhi ukushintsha indlela yokuphila. Kuyinto isifo esiyingozi nemiphumela yaso. Yini yezinkinga kungenzeka uma isilonda?
1. Ukopha kwenzeke kaningi kakhulu. Abakwazi kuzofihlwa, abonakala kuphela igazi ebuhlanzweni noma sezinyawo, ubuthakathaka kanye nezinye izimpawu ukopha. Kulokhu, lo sokulahlekelwa igazi. Uma ukopha kakhulu, isiguli udinga usizo lwezempilo ngokushesha.
2. Ngezinye izikhathi isilonda waphawula stenosis - ukuvaleka Ezansi esiswini. It livezwa ukuhlanza, umuzwa wobukhulu ku burping esiswini njalo.
3. Umphumela eziyingozi kakhulu izilonda - a perforation noma perforation, okuyinto ngesikhathi esifushane kungabangela ukufa isiguli. Ngakho-ke, zonke kulabo abaphethwe yilesi sifo, odinga ukukwazi izimpawu izilonda esiswini oyingozi e nesikhathi esanele sokuthatha isinyathelo, ukudla nemithi.
4. isilonda ingabagulisa umdlavuza isisu. Izimpawu zayo kuqala ezibaluleke ngokukhethekile: izinguquko ukunambitheka, ukuncipha emzibeni, ubuhlungu buthuntu esiswini.
Lona inkinga ezivamile lesi sifo, okungaholela ekufeni. Uma isilonda is hhayi ziphathwe, ibadla kude bonke zamatshe odongeni esiswini. Futhi ngokusebenzisa le imbobo kwenzeka uphonsa okuqukethwe phakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Lokhu kuholela peritonitis, okuyinto ngesikhathi esifushane kungabangela ukufa. Izimpawu isilonda perforated isisu kunzima ngento udidekile. The main uphawu - i-acute, kakhulu ubuhlungu besisu. Iziguli ukuyichazela njengoba angababulali. Ubuhlungu akusho abohle, kodwa kwandisa kuphela. Futhi kwanda ukukhwehlela, noma yikuphi ukunyakaza ngisho umoya kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izimpawu ukopha zenzeka: ngiphalaza igazi, ubuthakathaka, isiyezi kanye tinnitus. Hydrochloric acid nezinye okuqukethwe isisu kubangele ukuvuvukala peritoneum.
Nakuba izimpawu kolwelwesi futhi izilonda esiswini zihlukile, kodwa izimiso eziyisisekelo ukuphathwa ababelana ngayo. Into ebaluleke kakhulu - ukususa imbangela nokuvuvukala, futhi ke ungakwazi ukunquma emva ngihlolwa. Iziphi izindlela ezisetshenziswa kuleli yokwelapha lezi zifo?
- Kugucula tindlela tekuphila: ukubhema, utshwala, ukunamathela kosuku nokugwema izimo ezibangela ukucindezeleka.
- Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe ekudleni. Kukhona isidingo njalo futhi izingxenyana ezincane. Khipha ku ekudleni zonke ethosiwe, okunamafutha, okubabayo kanye enososo. Akuvunyelwe ukudla walondoloza, nososo, izinto ezibhakiwe broths bagxila, inyama kanye ikhofi. Izinkinga kungabangela isinkwa, amagilebhisi, okumuncu ne itiye eqinile.
- Qiniseka ukuthi uthathe imithi, udokotela kunikezelwe. Isilonda ngokuvamile zinikezwa 3-4 ukulungiselela kanyekanye (lokhu kusho "Cimetidine", "Nizotidin", "Likvirshpon", "Flakarbin", "Almagell", vitamin E, uvithamini B1 et al. Ngo inhlanganisela ezahlukene).
- Ukuze lula isimo lesiguli livame ukusetshenziswa amakhambi abantu, Physiotherapy futhi ukwelashwa spa.
Noma yimuphi izimpawu zezifo esiswini kungasiza ukususa amakhambi. Bangakwazi nje ukwenziwa ngamanzi abilayo, kodwa isinyathelo ukuze kusheshe kakhudlwana, kukhona izindlela ezimbalwa engavamile yilezi:
- 2 wezipuni imbiza Thyme engeza 0.5 amalitha iwayini ezimhlophe bese efakwa efrijini ngesonto. Khona-ke ubilise imizuzu embalwa futhi uhlobo. I ukumnika thatha 2 amathisipuni ngaphambi kokudla.
- Ungenza decoction of chamomile, Yarrow nobisi celandine. Phikelela utshani kwamahora ambalwa bese baphuze emini.
- I ezikhishwe ephumelelayo kunazo etholakala endaweni thermos. Ngakho, ungenza umuthi we daisy ne yefilakisi imbewu, ka elecampane noma licorice impande.
usizo ezinhle kakhulu ne ukuvuvukala esiswini ulwelwesi imikhiqizo bee:
- Phakathi nenyanga, usuku ngalunye kudingeka udle 10 amagremu propolis. Kubalulekile ukuba ukuhlafuna.
- ukusebenza izidakamizwa kusukela olwandle lalesi sihlahla noju. Udinga 3 wezipuni spoon amajikijolo abiliswe ingilazi yamanzi amaminithi angu-10 bese wengeza 3 wezipuni uju. Phuza ukumnika of kwengxenye isipuni ekuseni esiswini esingenalutho.
- amanzi Ngisho abavamile okufudumele ziyoncibilika ke spoon of uju uyokwenza izimpawu izilonda esiswini e abadala kancane evelele.
Kuthiwani uma festers glazik osanda kuzalwa
Yangaphakathi ukopha: Izimpawu kanye Izinhlobo
Iholo elijwayelekile eCanada. Umnotho weCanada